Mirror of the Witch ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး ~ Myanmar Asian TV Channel
Mirror of the Witch ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Posted by Myanmar Asian TV Channel with 43 comments
း​ခေတ်​က ​မှော်​အတတ်​ပညာ နဲ့ ကျိန်​စာအ​ကြောင်းတို့ကို Drama ဆန်​ဆန်​ရိုက်​ကူးပုံ​ဖော်​ထားတဲ့ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​လေးတခုဖြစ်​ပါတယ်​ ... အသက်​ ၁၅ နှစ်​သာ ရှိ​သေးတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး Kim Sae-ron ပါဝင်​ထားတဲ့ ဇာတ်​​လေးပါ ... ဇာတ်
​လမ်းအကျဉ်းက​တော့ - ဂျိုဆွန်းနိုင်​ငံ​တော်​ရဲ့ မိဖုရားကြီး ဘုရင်​မရှင်းက ကိုယ်​ဝန်​မရနိုင်​တာ​ကြောင့်​ နတ်​ဆရာ ဟွန်​ဂျိုးရဲ့ ​မှော်​နက်​အကူအညီဖြင့်​ မိန်းမပျို​လေးတ​ယောက်​ကို စ​တေးပြီး ကိုယ်​ဝန်​ရယူခဲ့ပါတယ်​ ... ထိုမိန်းမပျို​လေးက မိဖုရားကြီးရဲ့ ​မွေးဖွားလာမယ့်​ က​လေး​တွေကို ကျိန်​စာတိုက်​ခဲ့ပါတယ်​ ...
းမပျို​လေးက က​လေး​တွေကို ဘယ်​လိုကျိန်​စာတိုက်​ခဲ့လဲ ထိုက​လေး​တွေက​ရော တိုက်​ခဲ့တဲ့ ကျိန်​စာ​တွေကို ပျက်​ပျယ်​နိုင်​ပါ့မလားဆိုတာက​တော့ .. ဇာတ်​လမ်းထဲမှာပဲ ခံစားကြည့်​ကြပါ​နော်​ ...
AsianTV မှာ Rating 9.5 ရထားပြီး IMDB မှာလဲ Rating 7.4 ရထားကာ ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ TV Channel တစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ " JTBC " မှာ ထုတ်​လွှင့်​ဆဲ ဇာတ်​လမ်းတွဲတခုလဲဖြစ်​​သော​ကြောင့်​ လက်​မလွှတ်​တမ်း ကြည့်​ရှုသင့်​တဲ့ ဇာတ်​ကား​ကောင်း​လေးပါ ...
Genre : Fantasy , History , Romance , Medical
Encoder : LoL Episode 1
Posted in Fantasy, Historical, Korea, Medical, Romance
Kyawt Kay KhineJune 6, 2016 at 9:10 PMကျန်တဲ့ အပိုင်းဆက်တွေ ဆက်ပီး တင်ပေးပါအုံး ကြည့်ရတာ ဆန့်တငင်ငင်နဲ့ တစ်နေ့တစ်ပိုင်းတော့ ပုံမှန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ် ReplyDeleteRepliesMyanmar Asian TV ChannelJune 7, 2016 at 10:49 AMဟုတ်ကဲ့ပါ ... ကျွန်တော်တို့လဲ ကြိုးစားနေပါတယ် ... Admin တွေ Member တွေအကုန်လုံးက ကျောင်းသားတွေမိုိ့လုိ့ပါ ... တနေ့တပိုင်းကတော့ သိပ်အဆင်မပြေလို့ ... နှစ်ရက်တပိုင်းတော့ ပုံမှန်ကြိုးစားတင်ပေးသွားပါ့မယ် ... Thanks for your feedbackDeleteKyawt Kay KhineJune 7, 2016 at 8:22 PMဟုက်ကဲ့ပါ အားပေးလျှက်ပါ ဇာက်လမ်းတွေက ကောင်းလွန်းပါတယ်DeleteMyanmar Asian TV ChannelJune 8, 2016 at 5:43 AMကျေးဇူးပါ ... ကြိုးစားသွားပါ့မယ် ...DeletePaing Nyein OoAugust 25, 2016 at 6:49 PMAdmine အဖြစ် ကူညီပေးချင်ပါတယ်ဗျDeleteTayzar KokoOctober 21, 2016 at 3:17 AMကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေ ဆက်တင်ပေးပါအုန်းDeleteReplyImjado PrinceJune 15, 2016 at 7:43 PMLucky Romance, Another Oh Hae Young အဲ့ဒီ့ ကားလေးတေပါတင်ပေးပါလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ReplyDeleteRepliesMyanmar Asian TV ChannelJune 16, 2016 at 9:57 AMဟုတ်ကဲ့ပါ .. မှတ်သားထားပြီး .. အခါအခွင့်ကြုံရင် တင်ပေးသွားပါ့မယ် ...DeleteReplyImjado PrinceJune 15, 2016 at 7:43 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteMon LayJune 20, 2016 at 9:06 AMသိပ်မပြောချင်တော့ဘူးနော် အလုပ်မအားတဲ့ထဲက ရုပ်ရှင်မကြည့်ချင်ကြည့်အောင်လုပ်တယ် ခုကြည့်ချင်သွားတော့ အပြီးထိမတင်ဘူး ကျန်တဲ့အပိုင်းလည်မတင်ဘူး စိတ်ဆိုးချင်တယ်ReplyDeleteMinistry of SportsJune 26, 2016 at 7:48 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteMinistry of SportsJune 26, 2016 at 7:48 PMဇာတ်ကားအဆက်လေး ထပ်တင်ပေးပါအုံးနော် မျှော်ရတာမောပါတယ်ကွယ်ReplyDeleteKyawt Kay KhineJune 27, 2016 at 10:18 PMNext episode Please! adminအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ ^_^ReplyDeleteSaung NyiJuly 3, 2016 at 12:07 AMရမ်းကောင်းတယ် တင်ပေးပါဦးဗျို အပြင်မာ ၁၅ ပိုင်းထိထွက်နေပီ ReplyDeleteHtetaung HlaingJuly 4, 2016 at 2:14 AMတင်ပါဦးဗျိူ့ ဆက်တငင့်ငင့်နဲ့ReplyDeleteHtetaung HlaingJuly 7, 2016 at 10:43 PM၁၁ နဲ့ ၁၂ တင်ပါဦး ဗျိူ့ReplyDeleteCuteCrystalJuly 12, 2016 at 6:57 PMဆက်တင်ပေးပါဦး အပိုင်းက ၁၈ ပိုင်းထိထွက်နေပြီReplyDeleteHtetaung HlaingJuly 13, 2016 at 9:48 PMမတင်တော့ဘူးလားဗျိူ့ReplyDeleteUnknownJuly 17, 2016 at 11:18 AM12 မှာ ပွဲကြမ်း​နေပီ 13 မကြည့်​ရင်​ညဘက်​အိပ်​မ​ပျော်​​တော့ဘူး မြန်​မြန်​လုပ်​ဗျိုReplyDeleteopp oreJuly 17, 2016 at 4:57 PM12 မှာ ပွဲကြမ်း​နေပီ 13 မကြည့်​ရင်​ညဘက်​အိပ်​မ​ပျော်​​တော့ဘူး မြန်​မြန်​လုပ်​ဗျိုReplyDeletemayyu mgmgJuly 22, 2016 at 8:16 AM13 14 15 ဒုန်း ဒုန်း ဒုန်းReplyDeletetun linJuly 23, 2016 at 9:55 AMအပိုင်းဆက်လေးတင်ပါအုံးReplyDeletetun linJuly 23, 2016 at 9:57 AMအပိုင်းဆက်လေးတင်ပါအုံးReplyDeletenanwuttyee htetJuly 24, 2016 at 9:37 PMဆက် တင်ပေးပါဦး Admin တို့ ရေ.... ReplyDeletenanwuttyee htetJuly 25, 2016 at 8:30 PMအပိုင်း သစ် လေးတွေ ဘယ် တော့ တင် ပေးမှာ ဟင်... :( ReplyDeleteHtetaung HlaingJuly 25, 2016 at 11:31 PMအပြင်မှာခွေတောင်ထွက်နေပြီ မတင်သေးဘူးလား ReplyDeleteNay yanAugust 1, 2016 at 4:40 AMကျန်တဲ့ အပိုင်းဆက်တွေ ဆက်ပီး တင်ပေးပါအုံး13 14 15 ဒုန်း ဒုန်း ဒုန်းReplyDeleteNay yanAugust 1, 2016 at 4:41 AM ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ReplyDeleteRabel Mee LayAugust 3, 2016 at 9:39 PMnext episode???? PleaseReplyDeletehinn wayAugust 4, 2016 at 12:18 AMGold channel မှာ အပိုင်း ၅ ထိပဲကြည့်ရသေးတာခုမှ ရှာတွေ့တယ် myanmar asian TV channelကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျReplyDeletehinn wayAugust 5, 2016 at 1:17 AMအပိုင်း ၂၀ ထိ ပါ။ReplyDeletehinn wayAugust 6, 2016 at 3:17 AMအပိုင်း ၁၃ / ၁၄ တင်ပေးပါ CM ReplyDeleteSoe MoeAugust 6, 2016 at 9:16 PMဇာတ်ကားကောင်းကြေည့်ရလို့..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို.ReplyDeleteMyintsoe mwd08August 7, 2016 at 7:10 PMတကယ်တမ်း မိမိကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ကြည့်တော့မလွယ်ပါဘူးအရမ်းခက်ခဲပါတယ်..လွယ်မလို့ နဲ့ ခက်ပါတယ်..ဘာသာပြန်ပေးတဲ့သူရော တင်ပေးတဲ့အက်မင်များကိုပါ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ReplyDeleteMyintsoe mwd08August 7, 2016 at 7:12 PMအလုပ်တိုင်းမှာအခက်အခဲဆိုတာရှိစမြဲပါ...အခုလိုအောင်မြင်တာကိုက တော်ရုံဝီရိယနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး...ဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်...ReplyDeleteMickey BoomixAugust 10, 2016 at 12:11 PM12ကနေမတက်တော့ဘူးလားadminတို့ရေ😢ReplyDeletehinn wayAugust 11, 2016 at 11:07 PMအပိုင်း ၁၂ ကနေ မတက်တော့ဘူး admin ကျေးဇူးပြု၍ အပိုင်းဆက်လေး တင်ပေးပါနော် ။ReplyDeletehinn wayAugust 12, 2016 at 9:47 PMအပိုင်းဆက် မျှော် မျှော် မျှော် ReplyDeletehinn wayAugust 17, 2016 at 9:29 PMadmin ဒီကား အပိုင်းဆက် မတင်ပေးတော့ဘူးလား ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပေးပါ။ReplyDeleteTraccychit Lay polAugust 18, 2016 at 11:17 AMကျန်အပိုင်းတွေမျှော်နေတယ် တင်ပေးပါဦးReplyDeletehay marOctober 2, 2016 at 9:27 PMကျန်တဲ့ ကျန်တဲ့ အပိုင်းဆက်တွေ ဆက်ပီး တင်ပေးပါအုံး ကြည့်ရတာ ဆန့်တငင်ငင်နဲ့ တစ်နေ့တစ်ပိုင်းတော့ ပုံမှန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ် အပိုင်းတွေ မျှော်နေပါတယ်ReplyDeleteTayzar KokoOctober 21, 2016 at 3:28 AMကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေ မြန်မြန်လေး ဆက်တင်ပေးပါအမြဲ အားပေးနေပါတယ်...ReplyDeleteHnin HninMarch 8, 2017 at 7:49 PMMingalar par myanmarasiantv channel. Please kindly upload more episodes. Thank you so much.ReplyDeleteAdd commentLoad more...